Porn ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာခြင်း။ အသုံးပြုသူများကော။ (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
ရှိမုနျကိုလူးဝစ် Lajeunesse မှအိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ခင်ဗျားရဲ့နိဂုံးချုပ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီ porn အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်၏မေးခွန်းလွှာကိုပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန်ထိုက်တန်သင့်မသင့်ကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားနေသည်။ ငါ (ဒုတိယအ) ကိုညစ်ညမ်းမှုကနေထိခိုက်မှုတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်၊ ပြီးတော့နောက်ကွယ်ကနေစွန့်ခွာတာကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းတယ်။ ငါလေ့လာသင်ယူတာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များကိုတိုင်းတာလိုလျှင်သင်၏ဘာသာရပ်များနှင့်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုမေးရန်လိုသည်ဟုအကြံပြုသည်။
ငါ၏အက်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ porn နှင့်အပူတပြင်းအပေါ်ချိတ်ဆက်နေသောယောက်ျားအများကြီးဆွဲဆောင်လေ့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်ရှိသည်။ (အဘယ်ကြောင့်တွေ့သည် အဘယ်အရာကို Porn အသုံးပြုသူများငါ့ကိုသင်ပေးခဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စမ်းသပ်မှုအပြီးတွင်၎င်းတို့သည်သော့ခတ်ပြီးသောအခါလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများလျော့နည်းသွားခြင်း၊ ယုံကြည်မှုတိုးပွားလာခြင်း၊ စစ်မှန်သောအလားအလာရှိသောမိတ်ဖက်များအပေါ်ပိုမိုစွဲဆောင်မှုရှိခြင်းနှင့်ဘဝ၏သိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးများမှ ပိုမို၍ ပျော်မွေ့ခြင်းများကိုတင်ပြသည်။ သူတို့ရဲ့တွေ့ကြုံမှုအတော်များများကိုခေါ်တဲ့အခန်းမှာစုဆောင်းထားတယ် ပိုလျှံဖို့လမ်း.
ငါဘယ်ကလာတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့အတွက်၊ လိင်ကိစ္စနဲ့လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်ဆက်စပ်နေတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏ဆုချသောနေရာ၌ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုမှလာသည်။ သင် ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူများကိုမောင်းနှင်ရာတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္,၊ စွဲလမ်းမှုတွင်ပါ ၀ င်မှုသို့မဟုတ်ဤဖြစ်စဉ်များတွင်အာရုံကြောဓာတုဗေဒ dopamine ၏အခန်းကဏ္familiarကိုသင်မရင်းနှီးပါကကျွန်ုပ်သည်စာဖတ်ခြင်းအကြောင်းအရာအချို့ကိုအကြံပြုလိုပါသည်။ ဒီမှာပါ ဆောင်းပါးအတို ငါပြောနေတာကိုမင်းကိုသိစေမယ့်အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ကပြောတယ်။
ငါကျွမ်းကျင်သူများလိပ်စာကြည့်ဖို့ချင်ပါတယ်အန္တရာယ်လည်းအဘို့တည်ရှိ ဗီဒီယိုဂိမ်းအသုံးပြုသူများသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်၏အခြေခံအားဖြင့်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနေရာတွင် dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ်မည်သည့်ပစ္စည်း) ကိုမဆိုမဖြစ်မနေဖြစ်လာနိုင်သည်။ "အသစ်အဆန်း - ဝယ်လိုအား" သည် ဦး နှောက်၏ဤအစိပ်အပိုင်းကိုအလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည်အလွန်တကယ့်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်သင်၏လေ့လာမှုအတွက်ညစ်ညမ်းသောထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်အကြောင်းပြချက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်နိုင်ပါသလား။ (ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုမရှိလျှင်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ဆိုးကျိုးများမရှိဟုကောက်ချက်ချရန်ခက်ခဲသည်။ )
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်ပစ္စည်းများမှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ အကြောင်းအရာ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်မှုနှင့်တတိယပါတီများအားထိခိုက်နစ်နာခြင်းစသည့်အငြင်းပွားမှုများတွင်ရှုံးနိမ့်လေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်အားထိခိုက်လွယ်သောအကျိုးဆက်များအတွက်အရေးကြီးသောပြissueနာကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဦး နှောက်၏ဤအပိုင်းသည်အသစ်အဆန်းအပေါ်ဝယ်လိုအားသာမကတန်ဖိုးရှိမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏တန်ဖိုးကိုပါအလွန်တန်ဖိုးထားရန်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာသည်။ ထို့ကြောင့်ကြွက်တစ်ကောင်စီတွင်သုက်ပိုးအသစ်များကိုမိတ်ဖက်အသစ်များပေးသောယနေ့ supranormal လိင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိသဖြင့် ဦး နှောက်သည်ဤ“ အဖိုးတန်” အတွေ့အကြုံများကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်အလွယ်တကူပြန်လည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်။
ဆုလာဘ်အစီအစဉ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ထားခြင်းကသင်၏ဗဟုသုတနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းက“ ဗော့ဒ်ကာကြော်ငြာများသည်အရက်စွဲခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းစေသောအရာဖြစ်သည်” ဟုပြသခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနှိုင်းယှဉ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ porn အသုံးပြုသူများသည်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို သုံး၍ ဦး နှောက်၏အာရုံကြောဓာတုဗေဒပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူသူတို့၏ ဦး နှောက်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဗော့ဒ်ကာတွင်ကြော်ငြာများမည်သူမဆိုမြင့်မားမည်မဟုတ် Porn is အဆိုပါစွဲ; ဗော့ဒ်ကာရုပ်ပုံများမရှိကြပေ။
ဤ rewiring လုပ်ငန်းစဉ်သည်အသုံးပြုသူ၏ ဦး စားပေးများကိုအလျင်အမြန်ပြန်စီပေးသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်ဥပစာစကားမဟုတ်ပါ။ ဦး နှောက်မြေပုံများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသင်တန်းများ [ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကို] လှည့်ဖြားသည်အာရုံကြောအာရုံစိုက်မှု [အားဖြည့်ခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုအသစ်များ၏ dopamine စုစည်းမှု] ။ စ။ 108-9 ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက် -Norman Doidge (2007) က
အချို့သောအသုံးပြုသူများဒီတော့ထွက်ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို, ဘဝကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူခြင်းနှင့်အဘို့အညစ်ညမ်းအစားထိုးမှစတင်။ မိမိတို့အကျိုးကို circuitry မရှိတော့ကြိုးစားရကျိုးနပ်အဖြစ်အဆုံးစွန်ရိပ် မိ. ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာပျော်စရာကောင်းတယ်၊ မည်သည့်စွဲလမ်းမှုနှင့်မဆိုကဲ့သို့ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည် dopamine ကို dregregulated ။ ရလဒ်များပါဝင်သည် desensitized ထိုကဲ့သို့သောပုံမှန်မိတ်ဖက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကဲ့သို့သောသိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလွန်အမင်းဖြစ်လာခြင်း hypersensitive မည်သည့်အချက်မှ ဦး နှောက်နှင့်အတူဆက်စပ်ဖို့သူ့ဟာသူ rewired ထားပြီး "ကယ်ဆယ်ရေး။ " အသုံးပြုသူ၏ ဦး နှောက်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအမြဲတမ်းစကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများမည်သည့်လက္ခဏာကိုမဆိုဤအရာ၌အော်ဂဇင်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ သည်းခံမှုသည်တည်ဆောက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်ဆုတ်ခွာခြင်း၏စိတ်ဆင်းရဲမှုများကိုသက်သာစေရန်ပိုမိုစိတ် ၀ င်စားစရာပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်းကိုမဖြစ်မနေပြုလုပ်ရမည်။
ဤပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်ကမ္ဘာကြီးကိုမီးခိုးရောင်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤသံသရာမှဖမ်းမိသောအမျိုးသားများအနေဖြင့်အခြားသူများ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ သူတို့၏ ဦး နှောက်ကို“ ပြန်ဖွင့်” သည်အထိဘဝသည်အဓိပ္ပာယ်မဲ့ပုံရသည်၊ အံ့သြစရာကောင်းတာက၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျေနပ်မှုများကိုပင်လျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံအလွန်တိုတောင်းသောကာလ မှလွဲ၍ ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်အော်ဂဇင်ပြီးနောက်အရက်သောက်ခြင်းကိုအောင်မြင်စွာခြစ်ရာမရခြင်းကြောင့်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ (ပြင်းထန်သောအမြင့်ဆုံးသည်ပြင်းထန်သောအနိမ့်များနှင့်ပိုမိုသောဆန္ဒများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ )
များသောအားဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့အားချိတ်ဆက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့အားမကြာခဏ porn အသုံးပြုခြင်းမှခွာ။ သူတို့၏ ဦး နှောက်များအား equilibrium သို့ပြန်သွားရန်အခွင့်အရေးမပေးမချင်း၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်အရာများဖြတ်သန်းသွားသည်ကိုမသိကြပါ။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကြာမြင့်စွာထုတ်ယူခြင်းသည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည် (လှုပ်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ရာ) များစွာသောသူတို့သည်ပိတ်မိနေသည်ဟုခံစားရနိုင်သည်။
ငါ compulsive porn အသုံးပြုမှုကိုအသိအမှတ်ပြုထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်ဖြစ်ပါတယ်သံသယများနှင့်တိုးပွားလာ။ ငါသည်သင်တို့ရေးသားသူအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းကိုန်းကျင်လေ့လာမှုတစ်ခုဒီဇိုင်းလျှင်ငါ၏အလေ့လာရေး၏တရားဝင်မှုထင်ရှားဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထင်တယ် မဟာ Porn-OFF ။ သင့်ရဲ့ညစ်ညမ်း-သုံးပြီးလေ့လာမှုသင်တန်းသားများကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အသွားနိုင်လျှင်ထွက်ရှာမည် မပါဘဲ porn ကြည့်တာ။ (ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူ ၁၀၀ နီးပါးအနက် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် Great Porn-off တွင်နှစ်ပတ်ကြာလျှင်၎င်းမပါဘဲမသွားနိုင်ကြပါ။ ) ထို့အပြင်၎င်းတို့မပါရှိသည့်အချိန်အတွင်းသူတို့၏ခံစားချက်များကိုခြေရာခံပါ။
စကားမစပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုသည်အထူးအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏ဖိုရမ်တွင်လူတစ် ဦး တင်ထားသည့်အရာဒီမှာ။
သူကပြောပါတယ်, အခြားသောသူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသူ porn (Pre-အင်တာနက်) ကြိုက်တယ်နှင့်ဘယ်တော့မှ masturbating အကြောင်းကိုအပြစ်ရှိသလိုခံစားရတယ်ဘယ်တော့မှသော်လည်းသူ့အဘို့ compulsive ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ ဒါကြောင့်သိသာတဲ့ sensitivity ကိုကွဲပြား circuitry ဆုချ။
ငါကညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပူနေတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ကျွန်မတို့အားလုံးကိုအရမ်းဂရုစိုက်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာပညာတတ်တဲ့ယောက်ျားတွေဟာညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုတဲ့အန္တရာယ်ကိုကြုံတွေ့ရတဲ့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ဟာမနှစ်မြို့ဖွယ်ဂြိုဟ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်။ ဖားဝတ်စုံများကိုပိတ်မိနေသောမင်းများအားလုံးသည်စိတ်အားထက်သန်မှုပိုမိုတိုးပွားလာစေရန်အတောမသတ်ကြိုးစားနေသည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ တီထွင်ဖန်တီးမှု၊ ကောင်းသောအကြောင်းရင်းများ၊ ဆက်ဆံရေးများသို့မဟုတ်သဘာဝအပျော်အပါးများအတွက်အချိန်အနည်းငယ်၊
ငါထပ်ခံစားရတယ် တဖန်ငါစိတ်ခံစားမှုခံစားရတယ်။ ညစ်ညမ်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ လမ်းဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလှုံ့ဆော်မှုလျော့နည်းကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါတကယ်ကအခြားညဥ့်တစ်ခုအရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင်စဉ်အတွင်းအိပ်ပျော်! အမျိုးသမီးများအပေါ်ကျွန်ုပ်၏စိတ် ၀ င်စားမှုတိုးများလာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှုမှာမြင့်တက်လာပြီးထပ်မံလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ အခုအသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီ၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်အထိကျွန်တော့်အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ်ရင့်ကျက်မှုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီစွဲလမ်းမှုမှကျွန်တော်သက်သာပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါအရင်ကငါတစ်ခါမှမဆက်ဆံဖူးတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာငါ့ကိုကြီးပြင်းကူညီပေးခဲ့သည်။
ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကြင်ကြင်နာနာနဲ့လူထက်ပိုတဲ့ယုံကြည်မှုရှိသူတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ ငါမနေ့ကမိန်းမနှစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်၊ လက်ကိုလှုပ်ပြီးအိုင်တီကိုင်ပါ။ ဝိုး။ ငါဟာလူတိုင်းကိုစကားပြောရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ပုံမှန်စကားပြောဖို့စောင့်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကသူတို့ကလူကောင်းလူလို့ထင်တာကိုဟားတိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်သည်သန္နိresolve္ဌာန်ချပြီးအချည်းနှီးဖြစ်သော“ ငြိမ်းချမ်းစွာ” ခံစားရသည်။ ငါရည်ရွယ်ထားထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်း ဦး တည်သွားသောဇာတ်ညွှန်းနှစ်ခုစာမျက်နှာများကိုရေးသားခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းခေါင်မိုးမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။